Tag: mere | Martech Zone
Monday, March 16, 2020 Tọzdee, Machị 19, 2020 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme na mmemme ịre ahịa email niile… mana ozi infographic a sitere na ndị mọnk Email na-elekwasị anya na mmejọ ndị anyị na-eme tupu ịpị izipu Ga-ahụ ihe ole na ole kwuru banyere ndị mmekọ anyị na 250ok n'ihe eji arụ ọrụ na nnyefe ọrụ. Ka anyị wụlie aka na: Nnweta Deliverabrab Tupu anyị amalite, ànyị edobere maka ọdịda ma ọ bụ ihe ịga nke ọma? Ndị na-akwado anyị na 250ok nwere ihe ngwọta dị egwu nke nwere ike inye aka
Ewebata Factlọ Ọrụ Ntanetị: Mgbasa ozi Mobile Dị Nnọọ Mfe
Monday, March 27, 2017 Tuzdee, Machị 28, 2017 Yariv Erel
Mgbasa ozi ekwentị na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ngalaba na-eto ngwa ngwa ma sie ike nke akụ na ụba ahịa ụwa. Dabere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-azụ ahịa Magna, mgbasa ozi dijitalụ ga-akarị mgbasa ozi mgbasa ozi ọdịnala nke afọ a (ekele kachasị na mgbasa ozi mkpanaka). Ka ọ na-erule 2021, mgbasa ozi mkpanaka ga-abawanye na $ 215, ma ọ bụ pasent 72 nke ngụkọta ego zuru ezu mgbasa ozi mgbasa ozi. Ya mere, olee otu akara gị ga-esi pụta ìhè na mkpọtụ ahụ? Na AI na-elekwasị anya ngwaahịa naanị otu ụzọ
Webflow: Design, Prototype and Launch Dynamic, Web nrụọrụ
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 14, 2016 Douglas Karr
Fkwanyere waya waya bụ ihe mgbe ochie? M na-amalite na-eche echiche dị ka ọhụụ ọhụrụ nke WYSIWYG enweghị koodu, ịdọrọ na dobe ndị editọ ugbu a na-akụ ahịa. Usoro njikwa ọdịnaya na-ewepụta otu echiche na njedebe na njedebe n'ihu nwere ike bụrụ ihe mgbe ochie. Ee… ma eleghị anya ọbụna WordPress ma ha na-amalite ịchụkwudo. N'ime ndị mmebe 380,000 ejirila Webflow wuo saịtị karịrị 450,000. Ọ bụ ngwa nhazi weebụ, sistemụ njikwa ọdịnaya,